मध्यपूर्वको तनाव : कति शक्तिशाली छ इरान ? – मिथिला दैनिक
मिथिला दैनिक २३ पुष २०७६, बुधबार १३:१९
२३ पुस, काठमाडौं । इरानी सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह खुमेनीपछि शक्तिशाली व्यक्तिका रूपमा चिनिएका प्रमुख सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानीको हत्यापछि मध्यपूर्वी मुलुकको राजनीतिक माहोल खल्बलिएको छ । इरानले इराकमा रहेको अमेरिकी सैन्य अखडामा मिसायल आक्रमण गरेपछि दुई देशवीचको सम्बन्ध झनै तनावपूर्ण बनेको छ ।
मंगलबारमात्रै सुलेमानीको अन्त्येष्टिका क्रममा भागदौड हुँदा २५ जनाको ज्यान गएको इरानको प्रेस टीभीले जनाएको छ ।सम्भावित तनावको स्थितिलाई मध्यनजर राख्दै जर्मनीले इराकबाट आफ्ना सैनिकहरुलाई फिर्ता बोलाएको छ । जर्मन सेनाको मुख्यालयले इराकको अस्थायी शिविरमा रहेका सैनिकहरु फिर्ता लिएको जर्मन रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै सीएनएनले जनाएको छ । बग्दाद र ताजीका करीब ३५ सिपाहीहरूलाई कुवेत र जोर्डन सारिएको बताइएको छ ।
इरानले औपचारिकरुपमा नै ‘अब कुनै पनि प्रतिबन्धबिना युरेनियम हतियारलाई बढावा दिइने’ उल्लेख गरेको छ । यद्यपि इरानले संयुक्त राष्ट्र संघको आणविक हतियार निगरानी गर्ने संस्थामाथि गरिने सहयोग भने जारी राख्ने बताएको छ ।
इरान युरेनियमको हिसाबले शक्तिशाली मुलुकमा पर्छ । युरेनियम दुईवटा प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । एउटा न्युक्लियर पावर र न्युक्लियर बम बनाउनेका लागि समेत यसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
इरानले सन् २००८/०९ देखि नै तीब्र गतिमा न्युक्लियर बम बनाउने चाहना राखेको थियो । तर, विविध सम्झौताहरुका कारण उसले सहजै सोचेजस्तो छिटो हतियार निर्माण गर्न सकेको थिएन । तर, २०१५ को सम्झौताले उसको त्यो यात्रालाई घोषितरुपमा नै बन्द गर्‍यो ।
इरानले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको डेजफुल ब्यालेस्टिक मिसाइलले ६०० माइलसम्म आक्रमण गर्नसक्ने बताइएको छ । यद्यपि योभन्दा बाहेक अरु कति आणविक हतियार इरानसँग छ, त्यो भने यकीन छैन
सुलेमानी हत्याको बदलामा इरानले अमेरिकी सैन्य अखडामाथि मिसायल आक्रमण गरिसकेपछि अब परिस्थिति निकै जटिल बनेको छ ।
इरान वा अमेरिकाले युद्धको विगुल फुकेमा इरानमा त त्यसको गम्भीर असर पर्ने नै छ । यसबाट अमेरिकाले समेत नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
सन् २००१ देखि हालसम्म मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरुमा भएको युद्धका लागि मात्रै अमेरिकाले ५.९ टि्रलियन डलर खर्च गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । अहिलेको अवस्थामा इरानसँग युद्ध छेडियो भने अमेरिकालाई यही हाराहारीमा खर्च हुने सम्भावना औंल्याइएको छ । त्यसैले अमेरिकाले पनि तत्काल युद्ध छेड्ने अवस्था देखिँदैन ।
अहिले इरानको पक्षमा चीन र रसियाजस्ता दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरु छन् । चीन/इरान सम्बन्धको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष बेइजिङको तेल आयात हो । सेप्टेम्बर २०१७ देखि सेप्टेम्बर २०१८ सम्ममात्रै चीनले इरानबाट प्रतिदिन कम्तिमा ६ लाख ३० हजार ब्यारेल तेल आयात गरेको थियो । यस्तै, विभिन्न लगानी र सहयोगका कारण पनि चीन र रसियासँग इरानको सम्बन्ध राम्रो छ ।
अब इरानले के गर्ला भन्ने बारेमा विश्व जिज्ञासु बनेर हेरिरहेको छ । बदलाको घोषणा गरिसकेको इरानले सीधै अमेरिकामा नै आक्रमण छेड्छ या त अमेरिकाको सहयोगी अरु देशहरुमा आक्रमण गर्छ ? भन्ने चासो धेरैमा छ । मंगलबार संसदबाट समेत अमेरिकी सेनालाई आतंकारी घोषणा गरेपछि र मंगलबार रातिको मिसायल आक्रमणपछि झनै इरानको थप हमलाबारे चासो बढेको हो ।
इरानी आक्रमणबारे इजरायलले धेरै पहिलेदेखि आशंका जनाउँदै आएको छ । आर्थिक हिसाबले पनि अहिले अमेरिकाले इजरायलमा ४९ अर्ब डलरको लगानी छ । त्यस्तै, इजरायलीहरूको संयुक्त राज्य अमेरिकामा २४ अरब डलरको लगानी छ ।
अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार अमेरिकाले साउदी अरब, इजरायल र युएई जस्ता देशहरुमाथि आक्रमण गर्ने, अमेरिकी उच्च कूटनीतिक अधिकारीहरुको हत्या गर्ने, साइबर हमला गर्ने वा अमेरिकी तेल ट्यांकरमाथि आक्रमण गर्न सक्ने सम्भावित बाटोहरुको बारेमा बहस सुरु भएको छ ।
अमेरिकाले सुलेमानीको हत्यापछि आफ्ना उच्च अधिकारीको हत्या गर्न लागेकोले आफूले उनको हत्या गरेको बताएको थियो । यसले पनि अमेरिकी उच्च कूटनीतिक अधिकारीहरु इरानबाट असुरक्षित रहेको पुष्टि हुन्छ ।
त्यस्तै, विश्वको सबैभन्दा व्यस्त मानिने समुद्री रुट ‘स्टेट अफ हर्मुज’मा इरानले अमेरिका वा उसका सहयोगी मुलुकको जहाजमाथि आक्रमण गर्न इरानलाई धेरै सहज छ । त्यहाँ अवरोध सिर्जना गर्ने, मिसाइल प्रहार गर्ने, कब्जा गर्नेलगायतका काम समेत इरानले गर्नसक्ने आँकलन गरिएको छ । त्यसैले पनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बारम्बार इरानका ५२ स्थान निशानामा रहेको भन्दै संयमता अपनाउन इरानलाई चेतावनी दिँदै आएका छन् । @onlinekhabar